Uma uphupha ukuthi ugibele inqola (ikalishi, ingqukumbane) kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma uphupha uyidonsa inqola. Uma uphuphe uyigibela inqola lokho kubika ukushona phansi empilweni, okuba ukwehla ezingeni obukulo. Kungaba ukwehla esikhundleni esiphezulu obukuso ngokomsebenzi, ukuphatha noma ngokwendima oyidlalayo kulokho okwenzayo futhi onothando lwakho. Kepha uma uphupha ukuthi udonswa ngabantu abaningi kungaba yiphupho elihle elingasho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi. Uma uphupha uyishayela inqola, lokho kubika ubumpofu obuzayo obuzofika nobunzima obukhulu.
Tags Amakalishi, Izingqukumbane, Izinqola Post navigation
5 thoughts on “Amaphupho ngenqola”
Cela ukubuza kusho ukuthini uphupha udla ama apples ngiwakha esihlalahleni
Sawubona Phumla. Uma uphupha udla ama-apples kusho ukuthi kunezinto ezinhle ezizayo kuwe ngaphandle uma uwanambitha uthole ukuthi amuncu. Lokho kusho ibhadi. Nalu olunye ulwazi esinalo ngokuphupha ngezithelo: https://iafrika.org/amaphupho-ngokuvuna/
14/10/2017 at 11:19
min ngcela ukubuza ukuthi kuchazan ukuphuph wopha sengathi ukhulelwe ekubeni kusolakala vele ukuthi ukhulelwe kutkuth kuthiwa umntwana akabonakali
Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha ujahwa amaphoyisa, nokuphupha unqunu ngoba ayangihlupha lamaphupho.
Mabongi Julia Mhlungu
ngiyakhuleka emathogweni ngicela ukubuza ndlondlo kuchaza ukuthini ukuphupha amaphoyisa ezosesha ekhaya kodwa aphuma engatholanga lutho avalelisa ahamba